अन्डा कति स्वस्थकर ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य अन्डा कति स्वस्थकर ?
२०७४, ३ कार्तिक शुक्रबार १६:०६
अन्डामा पाइने प्रोटिनले मांसपेशी निर्माण र सुरक्षामा सघाउँछ भने सन्तुष्टि पनि बढाउँछ । अन्डामा डाएटरी कोलेस्टेरोल उच्च र स्याचुरेटेड फ्याट थोरै मात्रामा पाइन्छ, जुन ब्लड कोलेस्टेरोलका लागि खराब मानिन्छ ।
अन्डा पोषणले भरिपूर्ण खाने कुरा हो । यसमा उच्च गुणस्तरको प्रोटिन हुन्छ अर्थात यसमा हाम्रो शरीरका लागि अत्यावश्यक ९ वटा एमिनो एसिड पाइन्छ ।
अन्डामा पाइने यी एमिनो एसिड कृत्रिम रुपमा उत्पादन वा बनाउन सकिँदैन । यी एमिनो एसिड प्राप्त गर्न कुनै न कुनै प्राकृतिक खानेकुरा नै खानुपर्छ । अन्डामा पाइने प्रोटिनले मांसपेशी निर्माण र सुरक्षामा सघाउँछ भने सन्तुष्टि पनि बढाउँछ । यी दुवै कुरा शरीरको तौल नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
भिटामिन डी पाइने केही स्रोत मध्ये अन्डा पनि पर्छ । अन्डामा पाइने पोषक तत्व कोलिन (मिटामिन बी का तत्व मध्ये एउटा)ले नवजात शिशुलाई जन्मदा आउन सक्ने खराबीबाट जोगाउन मद्दत गर्छ ।
यस्तै अन्डामा भिटामिन ए, भिटामिन बी १२, रिबोफ्लविन (बी२) र एन्टिअक्सिडेन्ट सेलेनियमसँगै लुटिन र जियाक्सान्थिन पाइन्छ । लुटिन र जियाक्सान्थिनले आँखालाई स्वस्थ राख्न सघाउँछ ।
अन्डामा पाइने भिटामिन, खनिज जस्ता अधिकांश पोषक तत्व र क्यालोरी (ऊर्जा) यसको पहेंलो भागमा हुन्छ । तर के अन्डामा पाइने कोलेस्टरोलका बारे पनि यस्तै भन्न सकिन्छ ?
अन्डाको पहेंलो भागमा डाएटरी कोलेस्टरोल उच्च मात्रा पाइन्छ । तर सँगै के पनि सत्य हो भने अन्डाको पहेंलो भागमा स्याचुरेटेड फ्याट थोरै मात्रामा भएपनि यसले रगतमा खराब कोलेस्टरोलको मात्रा बढाउँछ ।
हालै गरिएको एउटा अध्ययनमा धेरै अन्डा (दैनिक एउटा) खानु र मुटुसम्बन्धी रोग र मस्तिष्कघातको जोखिमबीच कुनै सम्बन्ध देखिएन ।
सन् २०१६ मा फिनल्यान्डमा एक हजार भन्दा बढी व्यक्ति सामेल अर्को अध्ययनले कोलेस्टेरोल युक्त भोजन वा अन्डाको सम्बन्ध मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्नुसँग सम्बन्ध नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो अध्ययनमा वंशाणुगत रुपमा डायटरी कोलेस्टरोलको प्रभाव ब्लड कोलेस्टरोलमा देखिएका व्यक्ति समेत सामेल थिए ।
बरु अन्डा पकाउने र खाने तरिकाका साथै अन्डा अरु कुन खाने कुरामा मिसाएर खाइन्छ त्यसले स्वास्थ्यमा असल वा खराब असर पार्न सक्छ ।
एउटा ठूलो पोच अन्डामा ७१ क्यालोरी र २ ग्राम स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ भने पालुंगोमा एउटा अन्डाको पहेंलो भाग मिसाएर बनाएको अमलेटमा करिब करिब यति नै क्यालोरी र स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ । तर बेकन र हलेन्डाइज सस सहितको एग बेनेडिक्टमा भने ८ सय क्यालोरी र २६ ग्राम स्याचुरेटेड फ्याट हुन्छ ।
त्यसैले अन्डा खानुको मजा त लिनुहोस् तर कसरी खानुहन्छ, खाने तरिकामा भने विचार पु¥याउनुहोस् । अन्डा खाँदा अन्य फाइबयुक्त स्वास्थ्यवद्र्धक फलफूल, सागसब्जी र अन्नसँग खानुहोस् ।
Previous articleम्याग्दीमा २३ जना जुवाडे पक्राउ
Next articleस्वस्थ रहन यी खानेकुरा नछुटाउनुहोस्